အံ့သြလောက်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာရေးသားခြင်း (၁၀) ခု Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မတ်လ 13, 2019 တနင်္ဂနွေ, မတ်လ 7, 2021 ဂျိုးမက်လင်း
အကြောင်းအရာရေးသားခြင်း၏ပါ ၀ င်မှုနှင့်အနန္တတန်ခိုးရှင်ကိုဖော်ပြရန်မှန်ကန်သောစကားလုံးများကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်လူတိုင်းသည်အရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုလိုအပ်နေသည် - အပျော်တမ်းဘလော့ဂါများမှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းများအထိသူတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားနေသည်။
အစီရင်ခံစာအရဘလော့ဂ်တင်သောကုမ္ပဏီများသည်လက်ခံရရှိသည် 97% ပို link များ သူတို့ရဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကိုသူတို့ရဲ့ non-blogging counterparts တွေကိုထက် နောက်လေ့လာမှုတစ်ခုကဘလော့ဂ်ကိုသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ဖော်ပြခြင်းကသင့်အား ၄၃၄% ပိုကောင်းရန်အခွင့်အလမ်းပေးလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြသည် အလွန်အမင်းအဆင့် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပေါ်မှာ။
အောင်မြင်သောစာရေးသူတစ် ဦး ဖြစ်ရန်သင်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ပလပ်ဂင်များ၏အခြေအနေကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ဒီဂျစ်တယ်လက်ထောက်တွေကမင်းရဲ့စာအရေးအသားတိုးတက်အောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပါဝင်တဲ့စာအရေးအသားကိရိယာ ၁၀ ခုကိုဆက်ဖတ်ပါ။
၁။ Blog Topic Generator
အသစ်သောအကြောင်းအရာစိတ်ကူးကိုရှာရန်သည်သင်အပတ်တိုင်းသို့မဟုတ်နေ့စဉ်ပင်ရေးသားချက်များကိုထုတ်ဝေရန်လိုအပ်သည်။ အဲဒါကြောင့် HubSpot စာရေးသူများ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောခေါင်းစဉ်ကိုရှာဖွေရာတွင်ကူညီရန်ဘလော့ဂ်ခေါင်းစဉ် Generator ကိုတီထွင်ပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သော့ချက်စာလုံးတခုကိုရိုက်ထည့်ပြီးအကြံဥာဏ်များကိုပြသပါလိမ့်မည်။
ဥပမာ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်:
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး - Reality vs. မျှော်လင့်ချက်များ
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုစာလုံးရေ (၁၄၀) ကျော်ဖြင့်ရှင်းပြထားသည်
Hubspot ဘလော့ခေါင်းစဉ် Generator ကို FATJOE ဘလော့ဂ်ခေါင်းစဉ် Generator
၈။ Keyword Tool
Google ၏ Keyword Planner အပြင်ဘက်ရှိအရာများမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်ကြည့်လိုပါက thisKeyword Tool ကိုစမ်းသပ်သင့်ပါသည်။ ပလက်ဖောင်းသည်ရှာဖွေမှုသက်တမ်းတိုင်းအတွက် longtail ၇၀၀ ကျော်သော့ချက်စာလုံးအကြံပြုချက်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ဤကိရိယာသည်သင့်အားအထူးအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်ပင်တောင်းဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းကိုသင်လိုအပ်သလောက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည်။ Keyword Tool မှသင်မျှော်လင့်နိုင်သည့်အရာသည် Google ၏အသုံးအများဆုံးရှာဖွေမှုများကိုလျင်မြန်စွာဖော်ထုတ်ပြီးသင်၏ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောသော့ချက်စာလုံးများကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
keyword Tool ကို
3 ။ Coffitivity
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သော Coffitivity ကိုတွေ့ရသည်။ ဒီပလက်ဖောင်းဟာရုံးအပြင်ဘက်မှာအလုပ်လုပ်ရတာကိုနှစ်သက်ပေမယ့်မတတ်နိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုအခမဲ့ ၀ ိညာဉ်ရေးရာတွေအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာပါ။ Coffitivity သည်သင်၏တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလုပ်လုပ်ရန်ကူညီရန်ကော်ဖီ၏ပတ် ၀ န်းကျင်အသံများကိုဖန်တီးပေးသည်။
နံနက်ညစဉ်ညည်းညူမြည်တမ်းခြင်းနှင့်Café de Paris မှနေ့လည်စာစားရသောနားနေခန်းများနှင့်ဘရာဇီးဘစ်စထရိုစသည့်အသံကျယ်ကျယ်ကျယ်ဝန်းသောအသံများကိုပေးသည်။ Coffitivity သည်စာရေးဆရာများစွာအတွက်တကယ့်ကိုလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသည့်သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်အေးဆေးတည်ငြိမ်သည့်နေရာတွင်အလုပ်လုပ်နေသည်ဟူသောခံစားချက်ကိုပေးသည်။
4. Focusd နေပါ
Procrastination သည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုသတ်သည်၊ သို့သော်ဤပြproblemနာကိုကိုင်တွယ်ရန်နည်းလမ်းများလည်းရှိသည်။ Stay Focusd သည်အချိန်ဖြုန်းနေသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်သင်သုံးစွဲနိုင်သောအချိန်ပမာဏကိုကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးစေသည်။ ဒါကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်သလဲ?
သင်ပလပ်ဂင်သည်သင်အွန်လိုင်းသုံးစွဲသောအချိန်ကိုတိုင်းတာပြီးသတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်ကုန်သွားသည်နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားသည်။ ၎င်းသည် procrastinators ကိုသူတို့၏အလုပ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်စေပြီးနေ့စဉ်အလုပ်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ငါတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ချင်းတွေကိုလူသိရှင်ကြားကျေးဇူးတင်ပါတယ် စာစီစာကုံးမြေ ဒီအံ့သြဖွယ် tool ကိုမှကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်ဆက်ဘို့!
5 ။ 750 စကား
ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိစာရေးဆရာ ၅၀၀၀၀၀ နီးပါးသည်အဖိုးတန်အရေးအသားလက်ထောက်အဖြစ်စကား ၇၅၀ ကိုအသုံးပြုကြသည်။ ဒီကိရိယာကိုဘလော့ဂါများနေ့စဉ်စာအရေးအသားအလေ့အထကိုလက်ခံလာအောင်ကူညီဖို့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့လုပ်ထားတယ်။ ထို site ၏အမည်ကဖော်ပြသလိုပဲ site သည်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများအားနေ့စဉ်အနည်းဆုံးစကားလုံး ၇၅၀ (သို့မဟုတ်စာမျက်နှာသုံးမျက်နှာ) ရေးသားရန်တိုက်တွန်းသည်။ သင်ရေးသားနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ဘာရေးနေသည်ကိုအရေးမကြီးပါ။ ရည်မှန်းချက်မှာရှင်းပါသည် - ခဏတာပြီးနောက်နေ့စဉ်အရေးအသားသည်သင့်ထံအလိုအလျောက်ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်။
ဘလော့ဂ်ပို့စ်များရေးသားရန်ခက်ခဲသော်လည်းအဆင့်မြင့်ပညာရေးဆိုင်ရာဆောင်းပါးများကိုရေးသားရန်မှာ ပို၍ ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့်စာရေးသူအချို့သည်ကျွမ်းကျင်သောနယ်ပယ်အားလုံးတွင်အတွေ့အကြုံရှိစာရေးဆရာများစွာခန့်ထားသည့် Rushmyessay အေဂျင်စီကိုအသုံးပြုကြသည်။
Craig Fowler, မှာ headhunter UK အလုပ်အကိုင်များ BoosterRushmyessay သည် Master (PhD) ဘွဲ့နှင့်အမြန်ဆုံးအရည်အသွေးနှင့်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးရှိသူများကိုငှားရမ်းသည်။ ပို၍ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာ Rushmyessay သည်ဖောက်သည် ၂၄/၇ ကိုဖောက်သည်များအားထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်မက်ဆေ့ခ်ျပို့နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးပို့စ်များသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောကြောင့်၎င်းတို့သည်အသုံးပြုသူများကိုမေးခွန်းများမေးခြင်းသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များချခြင်းအားဖြင့်အရေးယူရန်လှုံ့ဆော်သည်။ ဆောင်းပါးတွေကိုပိုမိုအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စေချင်တယ်ဆိုရင် Survey Monkey ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ၎င်းသည်သင့်အားမိနစ်ပိုင်းအတွင်းအွန်လိုင်းထင်မြင်ချက်စစ်တမ်းများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်လွယ်ကူသောစစ်တမ်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်၏နောက်လိုက်များအားအရေးကြီးသည်ကိုဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးပြီး၎င်းကိုနောင်လာမည့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များအတွက်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
တည်းဖြတ်စရာမလိုဘဲဆောင်းပါးများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းသည်ဘယ်သောအခါမျှမကောင်းသောအကြံမဟုတ်ပါ။ စာလုံးပေါင်းသို့မဟုတ်သဒ္ဒါအမှားများမရှိစေရန်သင်စာသားအပိုင်းတိုင်းကိုစစ်ဆေးရမည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်လိုပါက၎င်းသည်အလွန်ခက်ခဲသောအလုပ်ဖြစ်နိုင်သဖြင့်သင်အသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည် Grammarly။ လူကြိုက်များသော proofreading plugin သည်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းစာသားအားလုံးကိုစစ်ဆေးပြီးအမှားများ၊ ရှုပ်ထွေးသောစာသားနှင့်သင်၏အကြောင်းအရာကိုမစုံလင်စေသည့်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည်။
သင်၏ပို့စ်များကိုမှန်ကန်ကြောင်းအထောက်အကူပြုစက်ကိုသင်အလိုမရှိပါကအခြားလွယ်ကူသောဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုရှိသေးသည်။ ၎င်းသည်ကျွမ်းကျင်သောအယ်ဒီတာအမြောက်အများဖြင့်ရေးသားထားသောတည်းဖြတ်ရေးအေဂျင်စီ GgradeMiners ပုံစံဖြင့်လာသည်။ သူတို့ကိုသင်သာဖုန်းခေါ်ရန်လိုအပ်ပြီးသူတို့ကသင့်အားကိစ္စတစ်ခုကိုကိုင်တွယ်ရန်အကောင့်မန်နေဂျာကိုလျင်မြန်စွာခန့်အပ်လိမ့်မည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ ပြီးပြည့်စုံသောတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်စတိုင်ကျခြင်းကိုသင်မျှော်လင့်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းရှိနောက်ဆုံးကိရိယာသည်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ Cliché Finder သည်စာရေးသူများကိုအလွန်အကျွံသုံးသောစကားလုံးများသို့မဟုတ်စကားစုများကိုဖော်ထုတ်ပြီးမီးမောင်းထိုးပြခြင်းဖြင့်သူတို့၏အကြောင်းအရာများကိုအရောင်တင်ရန်ကူညီသည်။ လူအများစုကဒီပြproblemနာကိုဂရုမစိုက်ကြပေမဲ့အွန်လိုင်းအရေးအသားမှာ clichis ဘယ်လောက်များများရှိတယ်ဆိုတာကိုသင်အံ့သြမိမှာပါ။ လေးနက်သောစာရေးဆရာတစ်ယောက်အနေဖြင့်၊ သင်သည်ဤကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်မျိုးကိုခွင့်မပြုလိုပါ။ ထို့ကြောင့်Cliché Finder ကို အသုံးပြု၍ ခြိမ်းခြောက်မှုကိုဖယ်ရှားပေးပါ။
အကောင်းဆုံးဘလော့ဂါများသည်စမတ်ကျပြီးတီထွင်ဖန်တီးနိုင်ရုံသာမကအွန်လိုင်းအရေးအသားအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ပလပ်အင်များကိုလည်းအောင်မြင်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်စာရေးဆရာများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာရေးသားနိုင်စေရန်နှင့်တစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆောင်းပါးများကိုဖန်တီးရန်ကူညီပေးသည်၊ ၎င်းသည်ထိပ်တန်းအကြောင်းအရာဒီဇိုင်နာဖြစ်လာရန်အတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။
သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်စေရန်အတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်သည့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာရေးသားခြင်း (၁၀) ခုစာရင်းကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြသခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်များရှိပါက၎င်းတို့ကိုစစ်ဆေးပြီးမှတ်ချက်ရေးပါ။
ထုတ်ဖော်: Martech Zone ဒီဆောင်းပါးမှာ Grammarly အတွက်သူ့ရဲ့ဆက်နွယ်မှု link ကိုအသုံးပြုနေသည်။
Tags: Blog ခေါင်းစဉ်မီးစက်တေးရေးငါ့အက်ဆေးမြန်မြန်စာရေးကိရိယာများ
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချစေရန်ကူညီနိုင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစျေးကွက်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ် ၁၀ ချက်